Gọvanọ Ifeanyi Ugwuanyi chọrọ iweta Oganiru n'Enugwu steeti. - NDỊ IGBO KWENU
Home / Ụwa / Ala Igbo / Gọvanọ Ifeanyi Ugwuanyi chọrọ iweta Oganiru n’Enugwu steeti.
ndiigbokwenu1 April 11, 2016	Ala Igbo, AZỤMAHỊA, Featured Leave a comment 22,274 Views
Nzute ntinye ego n’ahịa Enugwu Steeti ga-ebido na April 12 ruo April 14. Nzute a ga elebanye anya na ebe niile ohere iruputa ihe ga-eweta oganiru dị n’ime Enugwu Steeti. “Oganiru” bụ aha ha guru nzukọ a ga kpọkwute ọtụtụ ndị mmadụ ọnụ. Ndị ga-anọ na nzute a bụ ndị azụmahịa, ndị ụlọ-akụ, ndị nkwado azụmahịa,ndị ọkachamara n’ihe gbasara ego na azụmahịa, na ndị na-agbachitere mba dị iche-iche.
Na nzute a ha niile ga-akpa nkata gbasara otu e nwere ike ikwalite azụmahịa n’ebe ọrụ ugbo, ngwaahịa, igwuputa ihe n’ala, na nnabata ndị njem na Enugwu steeti na n’Ala-igbo niile. Onye-ndu Oganiru, Ike Chioke kwuru sị “ N’oge dị otua, oke ego ndị ọchịchị n’etiti n’enye ndị ọchịchị steeti belatara maka nsogbu dị na ahịa mmanụ-ala, ọ dị mkpa ka ndị ọchịchị chọwa ụzọ ọzọ enwere ike iji kpata ego ma kwado mmepe n’obodo anyị. E weputara Oganiru iji gosi ndị mmadụ ebe ohere iruputa ihe ga-eweta oganiru dị na steeti a.
“Mgbe anyị ga eru njedebe nzute a, ọ ga emepe ụzọ ka ndị niile so kpaa nkata a nwee nkwekọrịta n’akụkụ di iche-iche.Ndị chọrọ iso melite ma tinye ego n’ebe dịka Hotel Presidential, Nike Lake Resort, Ada Rice, Sunrise Flour Mills, na ndị ọzọ ga enwe efe ime ya. Ha ga-emepe ụzọ inabata ndị ga-etinye aka kwalite azụmahịa n’ala igbo site n’itinye aka ruputa ebe azụmahịa ga-adị mfe”.
Onye ọbụla chọrọ ichọpụtakwu maka nzute a na Oganiru, ya gaa na www.oganiru.com.ng
Gọvanọ Ifeanyi Ugwuanyi ekwugo sị na ebumnuche ya na ndị so ya achị Enugwu steeti bụ imepe ihe g’enye ndị mmadụ ọrụ, ilekọta ndị n’arụ ọrụ anya, iweta ezigbo ọchịchị, mmepe n’ime obodo, ikpe ziri ezi na ichebe obodo.
Enugwu Steeti Govano Ifeanyi Ugwuanyi	2016-04-11
Tags Enugwu Steeti Govano Ifeanyi Ugwuanyi
Previous Ihe onyonyo Onye Ije ‘The Traveller ‘
Next Kedu ka anyị si rute ebe a?
Aṅụrị juru ọtụtụ ndị Enugwu Steeti obi otu ndị ọchịchị ha si emepe ngalaba nile ...